Nhau - Fangming NewM inopemberera munhu wese Anofara May Zuva Zororo!
Chivabvu Zuva Revashandi, iro rinozivikanwawo sekuti "Chivabvu 1 Int'l Zuva reVashandi" kana "Zuva reVashandi Vepasi rose kana Chivabvu Zuva", izororo renyika munyika dzinopfuura makumi masere pasirese. Iyo setup paMay 1 gore rega. Uyu ndiwo mutambo wakabatana pamwe chete nevanhu vanoshanda pasirese.
Muna Chikunguru 1889, yechipiri International Congress yakatungamirwa naEngels yakaitirwa muParis guta, France. Musangano uyu wakapasisa chisungo chaitaura kuti vashandi vepasi rese vaizo fora musi waMay 1, 1890, uye vakasarudza kuita Chivabvu 1 gore rega rega seZuva reVashandi reInt'l. Hurumende Yekutungamira Kanzuru yeCentral People's Government yePeople's Republic of China yakaita danho muna Zvita 1949 kudoma Chivabvu 1 sezuva reVashandi. Mushure ma1989, iyo State Council yakanyanya kurumbidza mhando yenyika yevashandi uye vashandi vemberi makore ese mashanu, vangangoita vanhu zviuru zvitatu nguva imwe neimwe.
Tichinongedzera ku "Chiziviso cheGeneral Hofisi yeHurumende Kanzuru nezvegadziriro dzeimwe zororo mu2020", pamwe chete nemamiriro ezvinhu chaiwo ekambani yedu, kuburikidza nekutsvaga kwekambani, sarudza hurongwa hwakadzama hwaMay 1 Int'l Zuva reVashandi. Zororo re2020as rinotevera:
Zororo kubva Chivabvu 1, 2020 kusvika Chivabvu 5, 2020, zvachose mazuva mashanu.
Shanda Kutanga kubva Chivabvu 6, 2020.
Munguva yacho, chero zvihwitsi, ndapota fona pazasi penharembozha:
Sales Depart.: 18673229380 （Mutengesi Wekambani）
15516930005 （Sales Manager）
18838229829 (Export Sales Manager)